Namoota Beelaaf Saaxilaman Gargaaruun ykn akka Gargaaraman Gochuun Dirqama Mootummaati! – YEROOBLOG
Namoota Beelaaf Saaxilaman Gargaaruun ykn akka Gargaaraman Gochuun Dirqama Mootummaati!
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia	 September 26, 2015 December 25, 2015 1 Minute
Mootummaan Itoophiyaa ji’a lama dura lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa barbaadani baay’ee xiqqoodha, kanaaf gargaarsa dhaabbilee addunyaa fi biyoota kaanii hinbarbaadu; ofumakoon namoota beela’an kanneen garagaaruu nan danda’a; kana goochuuf humna qaba jedhee dhaaddachaa turera. Kan nama dhibu, mootummaan kun, amma immoo, namootni beela’an lakkoofsi isaanii waandabaleef, gargaarsi nabarbaachisaa jedhee dhaabbilleen adda adda akka gargaarsa nyaataa godhaniifi gaafachaa jira. Yeroo amma kanatti, lakkofsi namoota beela’anii miiliyoon shanii ol akka ta’e dubbatamaa jira. Isaan kun egaa namoota beela’a cimaaf kan saaxila ba’aniif warra du’aaf saaxilamaa jiranidha. Kanneen, guyyaatti altokko qofaa nyaatani immoo biyyitti kana keessatti miiliyoona hedduutti lakkaa’amu.
Jireenyi uummata biyyitti ammas taanaan, kan gadaadooti. Biyyi guddatte, misoomte jedhamee miidiyaaratti hololama; jireenyi nama garuu ammayyuu hinjijjiiramne. Kan waa hunda caalaa nama dinqisiisu, mootummaan kun yeroo rakkinni kun uumametti addunyaaf ibseera osoo ta’eeti namoonni hedduun sababa beelaatiin lubbun isaanii hindarbu ture. Akka natti fakkaatutti, mootummaan kun guddadheera/misoomera jedhee yeroo maraa waan odeesuuf, uumanni miiliyoonaan lakka’aman najalaa beela’aniiru jedhee addunyaati himachuun qaanii itti ta’eeti natti fakkaata. Jijjiirama qilleensaatiin kan ka’e bara kana bokkaan yeroo isaa eeggatee iddo hedduutti hinroobne. Kanarraan kan ka’e, qootee bultoonni nyaata oomishachuu hindandeenye. Horiin isaaniis sababa goginsaatiin bishaanii fi kaloo waandhabaniif jalaadhumaniiru. Isaanis kumaatamaan dhumaa jiru. Keesumaa naannoo Afaar, Sumaalee, Naannoo oromiyaa( Godinaa Baaalee, Godina Arsii Lixaa , Godina Booranaa), Naannoo Kibbaa dabalatee bakka hedduutti namni beelaan dararamaa jira.
Mootummaan keenyi, ”mootummaan misoomaa”, garuu namoota beela’aa jiraan kana ofiisaa sirriitti hin gargaarree, yookiin immoo rakkina jiruu addunyaatti yeroodhaan gabaasee akka gargaaraman hin goone. Ilaalchi mootummaa qabu, yoon qarshii piroojektii adda addaa ittiin hojjechiisaa jiru, warra beela’aniif kenne misoomni biyyitti duubatti harkifata kan jedhu dha. Mee laalaa, waa’ee namoota kumaan dhumanii yaaduu qabamoo waa’ee piroojektii isa boruu yaaduu qaba. Akka yaadakootti, namooti beelaan dhuman baraaruun waa hunda dursa qabachuu qaba jedheen amana. Mootummaan kun waggaa kudhan shan dura, uumanni Itoopiyaa guyyaatti si’a sadii akka nyaatan godha jedhe dhaadatee ture, garuu ammayyuu uummatni miiliyoona hedduutti lakkaa’aman guyyaatti al takka nyaachiisuu hindandeenye.
Addunyaaratti biyyi ”misoomaan akka malee gara fuulduratti kaachaa jirtu”, garuu uummanni ishee ammayyuu miiliyoonaan beelann kan jalaa dhumaa jiru Itoophiyaa qofadha.
Published September 26, 2015 December 25, 2015
Previous Post The Oromos Should Keep on Resisting the Implementation of the Addis Abeba Master Plan
Next Post Saving the Lives of People Should come before Any Deveploment Agenda!